कथा : प्रेमनगरी - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : आँसुले भीजेका सेता धरती
कविता : चरित्रचर्चा →
कती पटक पढियो : 175
बिहानै उठे मोबाइल चेक गरे एस एम एस थिएन,फेसबुक खोले त्यहाँ नि थिएन ।इमो भाइवर कतै उनको म्यासेज थिएन । हैट केटाको आइडियाले काम गरेछ मक्ख पर्दै धन्यवाद दिए । फोन गर्न खोजे ब्यालेन्स नभएको जानकारी आयो । होइन हिजो ५० रुपैयाँ हाल्या कसरी सकिएछ ? यो मुला एनसेलले पनि कंगाल पार्ने भयो ।१२००० तलब त यसै सकिने भयो यसरी नहुने भयो । सोचे सुवास कतारमा छ म्यासेज लेख्नु पर्यो एउटा भिषा मिलाइदे भनेर । त्यो मुले सुवास हुन त मिल्ने साथी हो हिजो आज ठूलो भएको छ हाम्रो कुरो सुन्दैन । पोहोर सम्म कलेजमा मेरै जुठो खान्थ्यो आज कमाएर ठूलो पल्टियो । कति न पढेर ठूलै हाकिम होइन्छ भनेर पढाइ अगाडी,उसले जित्यो बिदेश गएर ।
टुङ टुङ म्यासेजले सोच भंग गर्दियो ,मोबाइल हातैमा थियो म्यासेज हेरे राजेशको रैछ,अब टेक्स गर्न पनि ब्यालेन्स छैन । यसो हेरेको ममी किचेनमा खाना बनाउदै हुनुहुदोरैछ ,बाबा सायद राजनीति छाट्न चौकमा जानुभएको होला अनुमान लगाए ,लुसुक्क पसें कोठामा अनि दबाए राजेशको नम्बर साउतिमा बोले ओइ मुलाङ ब्यालेन्स छैन कल मि । लेन्डफोनबाट एनसेलमा कल गर्न बन्देज थियो बिलको रकम बढ्ने हुनाले तर आफ्नो अर्को उपाय थिएन। यसरी लुकिछिपी कति फोन गरियो पछि बिल आएपछि बाबाले हप्काउदा मेरो आफ्नै मोबाइल छ,ब्यालेन्स हुदा यतैबाट गरिन्छ नत्र साथीलाई मिसकल गर्दा फर्काउछन हजुरको लेन्डफोन छोइन्न । बोरु हजुरलेनै पो कल गर्नुभएको हुनुपर्छ ,नम्बर चिन्नु हुन्न कुन एनसेलको कुन एनटिसीको । यसरी उल्टै बाबालाई दोषी घोषणा गरेर उम्कियो ।
फोन बज्यो ममि चिच्याउनु भयो ओइ तेरो के काम छ ह ?हिजो आज तेरो चाला ठीक देख्दिन है, घरमा केही सघाउने पनि होइन फोन उठाउनु पर्दैन ? ह्या ममी उठाउदैछु त हो कति करा ? घरको काम के छ र घरको काम गर घरको काम गर भन्नुहुन्छ? रीसाएरनै जवाफ फर्काए । साथीले भिषा दिन्छु भनेकोछ अब म पनि बिदेश जान्छु दिन रात ल्याङ ल्याङ सुन्न सक्दिन । बल्ल बल्ल पाएको त्यो बोडिङको जबले पकेट खर्च निस्किदैन बाबाले सुक्को चुहाउनुहुने होइन हजुरसँग माग्यो उल्टै ल्याङ हानेर ट्याम्पर बढाउनुहुन्छ । झन जंगिएर बोले । कुरै कुरामा फोन उठाउन भुलेछु पून घण्टी बज्यो फोन राजेशको थियो दुई रिङ राम्रो सँग बजेको थिएन उठाएं ।
अ भन केटा के छ फोन गर भनेर किन फोन नउठाएको? उसले सोध्यो ।
के हुन घरमा सुड्डा सुड्डीले ल्याङ हान्छन् बिहान बिहान । अनि तेरो आइडियाले काम गर्यो है । त त बिछोडको गुरुनै रैछस नि । सैतानी आइडियाले भरिएको तेरो गिदीलाई सलाम । सुनासो अनि खुशी एकै पटक साँटे ।
ल ल अब पुरानो साइड लागि हाली अब नयाँ खोज्ने होइन ? उसले सोध्यो
के खोज्नु यार कंगाल मात्रै बनाउछन , फिस्स मुस्कान दिएर लुट्न थाल्छन् । अब हेर गाई पालिन्न दुध मात्र खाइन्छ दुनियाँ टेन्स किन लिनु । मागेको बाइकमा कति घुमाउनु गल्फ्रेन्ड त्यो पनि दुई दिने गल्फ्रेण्ड । मैले आफ्नो कुरा राखे
तेरो बाबुनी लाष्टै क्याँ अहिलेको जमनामा नि साइकलमा हिड्छन । कम्तिमा हुर्किएको छोराको त ईज्जतको ख्याल गर्नु । आफ्नो त बा बिन्दास बालै छैन बुढालाई बाइक किन्दिएको छन् ,जागिरको टेन्स न ,पैसाको टेन्स । हे ! भगवान अर्को जन्ममा नि गाठिस बाउनै देउ है । राजेश
तेरो बाउ राम्रो होइन एक नम्बरको भष्ट्रचारी हो हामीलाइ थाहा छैन र ? कालो धनमा मोज गर खप्परमा त लेखेकै रैछस नि साले । व्याङ मिसाएर गाली गरे मैले उसले कति बुझ्यो ।
ह्या छोड भरे बेलुका बोडिङ्ग छुटेपछी बंगालीकोमा आइज एक प्याक टुच्च लगाउनुपर्छ । उसले प्रस्ताव राख्यो ।
होस यार सधै पिउन्न ,हिजो नि बाबाले थाहा पाएछन गाली गर्दै थिए । खाएको बेला गाली गर्दा ट्याम्पर हाइ हुन्छ अनि जे पनि हुन सक्छ । बोरु म माछा खाउला त पिउनु । डर मिसाए मैले
त डाका पहिले माछा भन्छ्स पछि ट्याङ्की होस मेरो डबल ठोक्छस् तँ नचिनेको ड्याङको मुला होस र ? अनि साँची भोलि बिर्तामोड जानुपर्छ त्यो सं******* होटलमा भर्जिन ल्याएको छ रे चाख्न जानू पर्छ । रेट हाइ छ रे तर बालै भएन नि मेरो सुड्डोलाई फकाएर क्यास झारीहाल्छु नि ।अब म राख्छु भोलि ९ बजे कुथुक्स थुरेर चोकमा आइज नि । उसले कुरा फाइनल गरेर फोन राख्यो ।लामो हाइ गर्दै म लागे नुहाउन ।
त्यसै त्यसै नुहाएर पनि मुड फ्रेस भएको थिएन , ९:३० मा गेट भित्र नपसे पिन्सिपलको ल्याङ सुन्नुपर्छ । त्यो पिन्सिपलको मुख हेर्नै मन लाग्दैन तर पनि बाबुको कमाइले केही नभए आफैले कमाउनु पर्ने बाध्यता । कहिले काहीँ भगवानलाई दिल खोलेर गाली गर्न मन लाग्छ आखिए मलाइ कुनै धनीको घरमा जन्म दिएको भए उनको केनै जान्थियो ? तर गाली मनैमा दबाएर राख्नु पर्ने बाध्यता ,गाली गरेर आफ्नै रक्तचाप बढाउनु भन्दा अर्को फाइदा थिएन।
खाना खाएर पुरानो साइकल टिपेर लागे स्कुल , आज पढाउन मननै थिएन ।तर नुनको सोझो गर्नै पर्यो । मन नलागी नलागी पढाएँ,के के पठाएँ कसरी पढाएँ आफैलाई ज्ञान छैन। बल्ल बल्ल चार बजाएर घर गएँ । घर पुगेर नास्ता गर्न बसे अह मन मान्दै मानेन। ममिले के भयो किन मुख अध्यारो छ त बाबु भन्नु भयो । केहि भएको छैन ममी भनेर टार्न खोजे तर आमाको नजरबाट संतानको पीडा लुक्न सक्ने कुरै भएन । मलाई हातमा समातेर काखमा सुताउनु भयो,कपाल मुसार्दै सोध्नु भयो , के भएको छ भन्? हिजो आज जे भने पनि त नराम्रो मात्र सुन्छस् । खाना पनि राम्रो सँग खान छोडिस् । ममी पनि केहि भएको भए म भन्ने थिइन,हजुरलाई आज सम्म केहि लुकाएको छु?उल्टै इमोसनल ब्ल्याक मेल गरेर उम्किन खोजे।तर आमाको त्यो मायालुपनले मेरो बेथा झन बल्झियो ,अतित उम्लिएर आयो मानसपटलमा । मिग(mig) ३३ बाट हाम्रो भेट भएको एक ताका म मिगको क्रेजी ।धेरै साथीहरु थिए अझ भनौ मेरो लिष्टमा केटा भन्दा केटीनै बढी तर पनि कता कताबाट देव्यानी सँग मेरो निकटता बढ्यो मलाईनै थाहा छैन। हाइ हेलो हुदा हुदै हामी यति आत्मिय भयौ कि रात भर गाजेर कुरा गर्न थाल्यौ।एक साथीबाट माथी उक्लिएर कुरा गर्न थाल्यौ।एक श्रीमान श्रीमती हुने सबै कुरा च्याटमा हुन थाले,बीना लाज बीना धक हामी घण्टौ घण्टौ कल्पनाको सागरमा स्खलित हुन थाल्यौ । केहि समय पछी फोन नम्बर साटासाट भयो।अब झन् हामी फोनमै हराउन थाल्यौ विगत ८ महिनामा यस्तो रात थिएन उनि सँग कुरा नभएको होस्।हिजो देखी त्यो क्रम भंग भयो।खोइ कुन भुतले मलाई अब हाम्रो सम्बन्ध अगाडी बढाउन हुन्न भन्ने आदेश दियो । हामी घण्टौ घण्टा बुट्टाबारीको चिया बगानमा घुम्थियौ । हामीले तन मन सबै बाँडी सकेका थियौ । फोनमा कुरा हुदा काली तलाई भेटौ न मात्र डल्लै खाइदिन्छु भन्दा अहो ! अहो! फुर्ती हेरन दम जसको छैन उसैले डल्लै खाने गफ किन गर्नु,प्रतिस्पधा गरौ कसले कसलाई खादो रैछ।मलाइ कता कता लाज लागेर आउथियो,ग्लानी हुन्थ्यो । उ सँग बिताएका पल पल मलाई हिरा जस्तै अमुल्य लाग्थे।तर समयले फड्को मार्यो। उसले अझै मलाइ माया गर्छे,सायद म पनि माया गर्छु -आज यस्तो फिल हुदैछ।सादय माया छुट्दा मात्र फिल हुदो हो । भन्छन् नि साथैको देउता हेला हुन्छ भनेर । अर्कैको बाइक मागेर दकमको चिया बगान कहिले कन्यामको बगान घुम्न हिडियो । उनलाई पछाडी राखेर हिड्दाको मज्जा स्वर्गीय थियो ।
खासमा आज ग्लानी हुदैछ साथीको लै लै मा लागेर कतै मैले आफ्नो अभिन्न अंगलाई पन्साउन त लागेको छैन ? म सोच्नै सकेको छैन ।पाथीभरा भाँकेर खाएको कसम पनि तोड्न सकिन्छ? हे ! भगवान मलाई दिशानिर्देश गर । म पथभ्रष्ट हुदैछु या सहि पथमा हिड्दैछु अन्योलमा छु । बिहान उठदा जुन ताजगी ममा थियो अहिले घटेर ० लेबलमा पुगेकोछ । देव्यानी मलाई माफ गर ।
एक हप्ता अगाडीमात्रै साथीले उसको मोबाइलमा तिम्रो म्यासेज देखायो । त्यसमा लेखिएको थियो ” तिम्रो साथी मूर्ख रैछ,म उसलाई खेलाउना बनाउदैछु । मेरो लक्ष्य खेलाउनु हो,त्यो जस्तो पाखे सँग प्रेम गर्न सक्दिन । मैले कल गर भन्दा कल गर्ने,मलाइ ब्लालेन्स चाहियो भन्दा ब्यालेन्स हाल्दिने एउटा मूर्ख पात्र मैले खोजेको जो भेटाए अब मेरो मन उ बाट टन्न भयो । ”
जब मैले यो पढे म भक्कानिए,आफ्नो सामुन्नेको साथी देखिन,आँखा तिरमिर भए । मैले केही सहारा पाइन । साथीलाई अंगालो हालेर धोको फेरेर रोएँ । धेरै बेर रोएँ बग्न दिएँ आँसुलाई मुल्यहिन पानी जस्तै । मैले सोच्नै सकिन पत्याउनै सकिन यो तिम्रै शब्दहुन भनेर । आफुलाई म बीना आधा मान्ने आज कसरी पूरा भयौ ? मनले प्रश्न गर्यो दिमाग निशब्द थियो ।
धेरै समय रोएपछी म आफै थाके साथीले बोतलमा पानी दियो मैले पानी पिएँ,केही सम्हालिन खोजे । साथीले एउटा केटीले यसो भन्दैमा तेरो दुनियाँ सक्किएको छैन ।यस्ता केटी धेरै पाइन्छन् । अब तैले पून पाइला चाल्नुछ ,प्रेमनगरीमा एउटा विशाल घर बनाउनुछ ।
भन्न सजिलो छ यार देव्यानी मेरो माया हो म कसरी भुल्न सक्छु ? म
होइन अब त सँग के उपाय छ भुलेर नयाँ दुनियाँ बनाउन भन्दा ? साथी
म बदला लिन चाहन्छु ,उसले मलाइ होइन मैले उसलाई खेलौना बनाउदै थिएँ,उसको कुमारीतब भंग गर्ने सौभाग्य जो मैले पाएँ । दुई चार सय रिचार्ज अनि केही समय बाइकमा घुमेर उसले के पाई? मैले मज्जा गरे । हो त्यो देखाउनु छ । त मलाइ हेल्प गर राजेश । मैले अनुनय गरे
राजेश मेरो एक करिवको दोस्त उसले मलाइ धेरै सहयोग गरेकोछ । मलाइ पकेट मनी,बाइक सबै उपलब्ध गराउने उनै हो । राजेशले केही समय सोचेर भन्यो । त अब मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने छ ,त्यो मेरो अतीत होइन ,अतीत भएपनी म त्यो कालो सपना सम्झिनेछु भनेर त तयार हो ? हो म अब जस्तै मूल्य चुकाउनपनी तयार छु ,केही समयको पीडा भएर बगेको आँसु अबआक्रोश भएर छछल्कियो । ल ठीक उसो भए दुई तीन दिन त चुप बस । उसले फोन गरेमा सामान्य भएर कुरा गर ,टेक्स ,फेसबुक,भाइवर म्यासेज पठाउदै नपठा । अनि त्यसपछी के गर्ने म भन्छु ।
यसरी साथीको प्लान अनुसार म अगाडी बढ्दै गएँ । छट्पटी निकै बढ्यो । मैले साथीलाई भने खोइ यार मलाई कठीन हुदैछ , म सक्दिन यार यसरी बस्न । अहिले सम्म उसले कलनै गरिन । साथीले भन्यो हो ठीक छ प्लान सफल हुदैछ । यो अवधी एक हप्ता रहेमा उ तेरो जीवनबाट आफै हट्नेछे ।
आफू भित्र भित्रै जल्दै गए,दुई तीन चार हुँदै जादा मेरो यादमा हल्का पर्दा लाग्दै गयो । त्यो बीचमा चुरोटका कयौ बट्टा भने सकिए।कति मानसिक तनाव भोगे त्यो लेखेर साध्य छैन । तर कसम खाएको थिएँ त्यो केटीलाई भेट्दिन,कुरा गर्दिन । यसरी आज हप्ता दिन पुग्यो । (बिहानै म खुशी एउटा डेटलाइन पूरा सकुशल पूरा भएकोमा थिएँ )।
जब बिहान राजेश सँग कुरा गरेर फोन राखे एउटा नयाँ नम्बर बाट म्यासेज आयो । नयाँ नम्बरबाट म्यासेज आएको हुनाले म्यासेज हेर्न हतारिएँ । म्यासेजमा लेखिएको थियो ” यो जूनीमा तिम्रो हुन सकिन सक्दिन,किन कसरी त्यो नखोज्नु । मैले एउटा चाल चलेको थिएँ सफल भए,साँच्चै तिमी मूर्ख थियौ मैले चालेको चाल सफल भयो । तिमी खुशी हुनु । मलाई भेट्ने,फोन गर्ने कुचेष्टा नगर्नु । भुल्दैछौ पूरा पूरा भुल्नु । म हिजो सम्म चाहन्थे मेरो अनुहारमा कालो पोतियोस तिम्रो नजरमा,धेरै सोचे म कालो पोतिएको अनुहार लिएर सधै बाँच्न सक्दिन थिएँ । कारण नखोज बस यो जूनी तिमी र म एक भएनौ । उहीँ अभागी देब्यानी ।
रोमनमा लेखिएका यी शब्द मेरो मुटुमा झिर बने रोपिएँ। आखिर म मुर्खनै रैछु । ग्लानीको अग्नीमा जति सक्छु उति जल्छु । यिनै शब्दले दिन भर मलाइ तनाव दिए । म्यासेज आएको नम्बरमा दिन भरमा २०० बढी प्रयास गरे लाग्दै लागेन । मिग बाट सुरुभएको यात्रा टेक्समा आएर सकियो । खोइ आफ्नै प्रेमलाई कसरी रिप लेखौ ?
फेसबुक खोलेर स्टाटस लेखे – “डिजिटल साइडबाट शुरु भएर दिल सम्म पुग्यौ,अन्तिम भेट डिजिटल स्क्रीनमै भयो । रिप हाम्रो प्रेम , अब यो प्रेम नगरीबाट सारा त्यागेर सुकुम्बासी बनेको घोषणा । ”
अब के प्रतिक्रिया आउछन् भोलि हेरौला ।
विधा : नेपाली कथा | Nirajan Prabhat. यस रचनालाई बूकमार्क गर्नुहोस् ।